Rasmi: filimka Padman iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay – Filimside.net
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna keenay 1.50 Crore (Trade Figure).
Padman wuxuu ku ganacsi noqday maalintii shalay ahayd Aiyaary oo masraxa ku cusub balse sidoo kale waxay isku ganacsi noqdeen oo soo qabtay filimka Padmaavat oo Isniintiisa afaraad tiyaatarada saaran.
Sida muuqato Padman todobaadkiisa labaad wuxuu keeni doonaa 14 Crore taasi oo filimkaan cimri ahaantiisa mudo labo todobaad gaarsiin doono 76 Crore sidoo kalena filimkaan wuxuu tiyaatarada ka dagi doonaa asigoo 80 Crore xoogaa u raacday.
Padman oo guuleestay wuxuu sameeyay ganacsi iska wacan laakiin 100 Crore inuu gaaro wey adkeyd marka laga cabir qaato fariintiisa oo xadidneyd iyo xiligii todobaadka Jamhuuriga (26 Jan) uu ganacsi wacan sameen lahaa inuu filimka Padmaavat u dhaafay.
Padman waa filim ganacsi ahaan ku liito gobolada Akshay Kumar waligiis ku xoog badnaan jiray sida Waqooyiga, bartamaha iyo bariga Hindiya madaama dadka halkaas ku nool iska diideen fariinta filimkaan.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Padman iyo mudo 11 maalmood ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka kowaad – 62 Crore (Qiyaas)
Jimco labaad – 2 Crore (Qiyaas)
Sabti labaad – 3 Crore (Qiyaas)
Axad labaad- 3.75 Crore (Qiyaas)
Isniin labaad – 1.50 Crore
Todobaadka labaad – 10.25 Crore (mudo 4-maalmood ah)
Wadarta Guud – 72.25 Crore (Trade Figure)